Kuverenga kwangu dema nepingi muna Chikunguru na Nyamavhuvhu. 2nd kuendesa: iwo maruva. | Zvazvino Zvinyorwa
Uye ichi ndicho 2nd kuendesa yesarudzo yemanoveli akaverengwa mumwedzi iyi yaChikunguru naNyamavhuvhu. Mazita matatu e romance novel iyo yandinowanzo bhadhara iyo kusimba uye kusviba kwerudzi rwangu rwandinofarira. Izvo hazvisi zvese zvinogona kuve ropa nemhosva. Nguva dzose unoda kadiki pink, rerudo uye zvisingaite rudo nguva dzose uye nekubata kwake kwe eroticism.
2 Mutongi Asina Kuremekedzwa - Olivia Ardey
Yokutanga novel ichi North America munyori ndiani akatumira pa 2012. Ndinofanira kutaura kuti ndakaverengawo yechipiri, Blackmoore (2013), asi uyu akandifadza zvakanyanya. Ivo chaizvo vari vaviri zvechimiro chimwe chete, cheka uye kugadzirwa. Gadza munguva yeRegency, goverana mavara uye marongero yakanangana nemhando yacho. Saka kana iwe uri mudiwa wenguva uye iyo Yakawanda inoshamisira uye inodanana England, Izvo zvinoshamisa. Uye ini zvakare ndine yangu pink pini.
Edenbrooke, hongu, ndizvozvo imba huru yakazadzwa nemakamuri eumbozha, raibhurari isingaenzaniswi, uye nzvimbo dzinotyisa dzakakukomberedza. Uye zvinosvika kwaari Marianne daventry, kufinhwa nekugara muBath uye kumhanya kubva kune anovhiringidza sutu. Wakatambira tsamba kubva ku hanzvadzi Cecily kuitira kuti amushanyire ikoko.
Asi munzira iye nemusikana wake webasa vari kurwiswa nebhanditi. Vanofanira kumira paimba yevaeni apo Marianne achasangana ne zvakavanzika hazvizivikanwe inozove iyo mugari wenhaka by Edwinbrooke. Iye mugari wenhaka akanaka acharatidzawo iyo akavimbiswa nezve Cecily. Uye achiri kuLondon Marianne, iyo inofuratira iyi ruzivo, ichave nemukana weku kuva kupfuura shamwari ye. Saka kupokana kunoshumirwa kana hanzvadzi mbiri idzi dzasangana zvakare.
Muchinda pasina rukudzo - Olivia Ardey
Kusvirwa munyori ane mukurumbira werudo munyori uyo akaberekerwa mu Alemania. Pasina nguva mhuri yake yakatamira ku Valencia uye anogara ikoko nemurume wake nevana vaviri. Nyora zvakare nyaya nenyaya uye ndiye munyori wedzimwe dzinoverengeka dzinoverengeka dzaakakunda nadzo mibairo yakati wandei.
Iri rave zita remusoro ngatiti kupisa pane zvese, sezvo Ardey achifarira zvakanyanya yakajeka yenyaya dzerudo dzevanyori vayo. Munyaya iyi tinosangana Damien Murray, chii chinonzi libertine inonyanya kuzivikanwa muLondon.
Asi pakafa baba vake uye, panguva ye kuverenga kwechido, iyezvino Mutongi mutsva weKedwell anogamuchira zvidimbu zviviri zvemashoko izvo zvaasingade. Imwe ndeyekuti kune mugari wenhaka asingazivikanwe. Imwe, iyo inofanirwa kutevedzera zvimwe zvikamu testamentary kana iwe uchida kugamuchira mugove wako wenhaka. Asi zvinoitika kuti munhu anotarisira kusangana nemamiriro ezvinhu akadaro lady oriana williams, amai vemukwikwidzi mudiki waDamien.
Saka Oriana naDamien ivo vachafanirwa kuita rwendo nenzvimbo ina dzekuzadzisa izvo zvikamu. Uye kunyangwe achienda achizeza, Damien haagone kubatsira asi kunzwa kukwezva kwaari, ndiani achaona kuti pasi peiyo façade yemutambo wekutamba, Damien murume uyo atambura.
Uye pakupedzisira, inoverengeka ne American Smith kusanganisa kupi nhoroondo uye kudanana neiyo protagonist stereotype iyo isingawanzo kutadza mumhando idzi: Viking. Yakatumidzwa zita Brage norwald uye iri Viking yekushandisa asi iri brown. Haana kumbokundwa hondo, saka yaita zvese kuti ibudirire. Uye anozviita, asi hazvizove muhondo, kwaanokundwa nemaSaxon nekuda kwekunyengera kwepedyo.
Nekudaro, uye kunyangwe uri akuvara uye zviitwe musungwa, anosangana ne shamwari isingatarisirwi. Mukadzi dynna ndiye chikomba chaiyewo stereotypical yakaipa lousy Saxon muchinda Edmund. Dynna anomuvenga uye anoona mukana tiza padyo neviking. Uye saka vanoita. Mubvunzo ndewokuti kana vachigona kupukunyuka kune avo vanovatambudza kana kune rudo rwavangatadza kubatsira asi kunzwa.
Kunakidzwa, asi zvakatiomera mune dzimwe nzvimbo. Kune zvekare kumwe kukundikana kwakakomba senge, semuenzaniso, kusimba kunopihwa hunhu hwemurume akaipa uyezve kumutumira pasina kumwe kunonoka. Kunyange zvakadaro, inogona kuverengerwa zvirinani nekutarisa kwekutarisa nezve akawanda cliches emhando.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Romance novel » Kuverenga kwangu dema nepingi muna Chikunguru na Nyamavhuvhu. 2nd kuendesa: iwo maruva.